ताल Baikal धेरै जाति र राष्ट्रका लागि पवित्र छ। यो अचम्मको प्राकृतिक आश्चर्य कारण संग मिथक र दन्त्यकथा, र स्थानीय shamans को एक ठूलो संख्या ताल शक्ति को वास्तविक ठाउँ विचार र यो यहाँ छ आफ्नो गोप्य रीतिथितिहरू खर्च। सबैभन्दा कदर सपना - लागि धेरै रूस लेक Baikal भ्रमण गर्न। तर यहाँ यसको कार्यान्वयन तरिका सधैं अनिश्चितकालीन सौतेली। हाम्रो लेखमा सबै कुरा ड्रप र प्राचीन ताल को किनारा गर्न अन्तमा जाने निर्णय गर्नेहरूलाई उपयोगी हुनेछ। लेक Baikal गर्न मास्को देखि प्राप्त गर्न कसरी जानकारीको लागि, हामी सबैभन्दा विवरण देखाउने छौँ।
दूरी मास्को र Baikal अलग
सामान्यतया एक अनिश्चितकालीन अवधिको लागि एक पवित्र ताल गर्न यात्रा सौतेली छ लागि जो सबै भन्दा गहन कारण, ताल देखि रूस को केन्द्रीय भाग अलग दूरी छ। उसलाई पछि भइरहेको सयौं सडक र देशहरू यात्रा, पनि अनुभवी यात्री लागि महत्वपूर्ण देखिन्छ।
औसत अनुमान अनुसार, Muscovites को पाँच हजार तीन सय किलोमिटर तोडने, ताल मा हुन सक्छ। यातायात मार्ग को मोड आधारमा बारेमा पाँच सय किलोमिटर द्वारा थप वृद्धि गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह, सबैले आश्चर्य को धेरै tayaschee, यस्तो यात्रामा निर्णय गरिनेछ। तर पवित्र ताल भ्रमण गर्ने सबै पर्यटक, केही संग यात्रा को अनुभव र भावना तुलना गर्न सकिन्छ तर्क।
तपाईं अझै पनि जानकारी रुचि राख्नुहुन्छ भने, पोखरी Baikal गर्न मास्को कसरी प्राप्त गर्न, त्यसपछि हामी तपाईंलाई सबै भन्दा राम्रो मार्गहरू बताउन तयार छन्। र पनि यात्रा को अनुमानित लागत मा अभिमुखिकरण।
ताल Baikal: मास्को देखि प्राप्त गर्न कसरी
को गर्मी मा संसारमा सबैभन्दा सुन्दर ताल गर्न राजधानी मार्ग धेरै लोकप्रिय बन्दैछ। आखिर, ताल भ्रमण गर्न उत्तम समय - यो गर्मी महिना हो। हुनत बारम्बार तापमान परिवर्तन यस अवधिमा अवलोकन जुलाई र अगस्ट, सबैभन्दा सहज छन्।
लेक Baikal गर्न मास्को देखि प्राप्त गर्न कसरी विचार भएकाहरूलाई, सामान्यतया निम्न यात्रा विकल्पहरू मानिन्छ:
तीमध्ये प्रत्येक यसको आफ्नै peculiarities छ, र तिनीहरूले अनुभवी यात्री थाहा र आवश्यकता हो, र एक पटक विदेशी विजयी दिइएको छैन यात्री, अनुभव।
Baykal: विमान द्वारा मास्को देखि प्राप्त गर्न कसरी
यो पवित्र ताल को बैंकहरू हुन तेज र सबै भन्दा सुविधाजनक तरिका हो। तपाईं मास्को मा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले लागि पोखरी Baikal बस्तियों गर्न घनिष्ठ भएको साइबेरियन शहर निम्न हुनेछ:
माथिको शहर को प्रत्येक संग मास्को हावा संचार स्थापित भएको छ। तर यहाँ पर्यटकहरुका लागि एक अप्रिय आश्चर्य यो एकदम अनियमित छ भन्ने तथ्यलाई हुनेछ छ। यो इर्कुत्स्क को गन्तव्य विमानस्थल चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, यहाँ मास्को बाट उडानहरू धेरै पटक एक हप्ताको उड गर्न, र धेरै सुविधाजनक हुनेछ ताल प्राप्त गर्नुहोस्।
मनमा राख्न कि उडान - यो इर्कुत्स्क रहन सस्ता तरिका छैन। वयस्कहरूको लागि एक राउन्ड यात्राको टिकट हजार पन्ध्र भन्दा कुनै कम rubles खर्च हुनेछ। बाटो मा तपाईं पाँच र आधा घण्टा बारेमा खर्च हुनेछ। यो आवश्यक छैन सुरक्षित र स्थानान्तरण संग उडानहरू चयन गर्न छ: तिनीहरूले सामान्यतया त्यसैले अर्को पाँच वा छ घण्टा यात्रा विस्तार गर्न सस्तो हो।
तपाईं अग्रिम आफ्नो टिकट आदेश भने, तिनीहरूले बारेमा बीस प्रतिशत सामान्य मूल्य भन्दा कम खर्च हुनेछ। साथै, त्यहाँ स्टक र बिक्री मा वृद्धि संभावना छन्।
इर्कुत्स्क देखि यो निम्न स्थानहरूमा जान सर्वश्रेष्ठ छ:
तपाईं ट्याक्सी वा मिनिबस यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्। सत्तरी तपाईं घण्टा एक जोडी हटाउन हुनेछ किलोमिटर।
त्यसैले तपाईं लेक Baikal गर्न विमान जान पनि महंगा छ निर्णय गर्नुभएको छ। कसरी रेल द्वारा मास्को देखि प्राप्त गर्न? त्यहाँ जटिल केही छ।
इर्कुत्स्क, Listvyanka, उलानबातार-Ude - रेल द्वारा आफ्नो यात्रा योजना जब तपाईं खातामा राजधानी बाट प्रत्यक्ष हामी पहिले नै सूचीकृत छन्, जो एउटै शहर, मा पुग्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई लिन आवश्यक छ। तर यस मामला मा, यात्रा बारे तीन दिन हुनेछ।
यो वास्तवमा एउटा अत्यावश्यक यात्रा माइनस छ। सबै पछि, रेल मा सबै राम्रो महसूस यस्तो लामो समय। तर धेरै को लागि टिकट मूल्य बाटो साथ केही असुविधाहरु लागि क्षतिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। एक पक्ष गर्न आरक्षित सीट को औसत मूल्य - यो पाँच हजार छ। साथै, कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यो मार्गमा मौसम टिकट हट केक जस्तै बाहिर बेचिन्छ। त्यसैले तपाईं दुईतर्फी टिकट लिन कम्तिमा चुस्त हुन आवश्यक छ।
तपाईं गन्तव्य उलानबातार-Ude चयन भने, त्यसपछि यो पोखरी Baikal को पूर्व तट जाने गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, सबै भन्दा पर्यटकहरु लोकप्रिय छन् Chivyrkuisky खाडी र barguzin उपत्यका।
यदि तपाईं - धेरै छैन पर्यटकहरु, त्यसपछि Severobaikalsk गर्न रेल टिकट लिन जहाँ जंगली स्थानहरूको प्रेमी। यो शहर सामान्यतया लेक Baikal उत्तरी भाग पठाइएका छन्। यसलाई जहाँ यो पाल र मनोरञ्जनको लागि आवश्यक सबै सुविधा संग आउन सबै भन्दा राम्रो धेरै राम्रो taiga स्थानहरू छ।
Baikal बसें, ट्याक्सी, र को पाठ्यक्रम ट्याक्सी यी शहर को कुनै पनि देखि।
तपाईंको आफ्नै कार मा लेक Baikal एक यात्रा
धेरै Muscovites लेक Baikal आफ्नै कार संग योजना, एउटा वास्तविक साहसिक को सपना। कसरी कार द्वारा मास्को देखि प्राप्त गर्न? त्यसैले यहाँ सरल छैन। निस्सन्देह, ज्ञात र एकदम सक्रिय को धेरै निर्देशन, तर यस्तो लामो सडक ठूलो कठिनाइ संग fraught।
पहिलो स्थानमा पर्यटकहरु मा सडक को केही खण्डहरू मा सडक गुणस्तर चाहेको गर्न धेरै छोड्छ कि मनमा राख्नुपर्छ। र यो एक कार टूटने गर्न प्रमुख छ। साथै, तपाईंले ध्यान दिएर साथ अन्य प्रमुख शहर मा सम्भव आगमन योजना र रोक्न आवश्यक संघीय राजमार्ग।
खैर, आफ्नो मार्ग योजना दुई तरिकामा लेक Baikal गर्न। Muscovites निशान "वोल्गा" (एम-7) र "साइबेरिया" (एम-53) बीच एक विकल्प छ। बाटो साथ, यात्री नयाँ मान्छे र रोचक स्थानहरू भेट्न अवसर पाउनेछन्, विभिन्न शहर पूरा हुनेछ। यो यात्री यी पाँच हजार किलोमिटर पाँच समय क्षेत्र, दिन यात्रा को अवधि असर गर्नेछ जो परिवर्तन गर्न भनेर रोचक छ। रूस मा अनुभवी autotourists सधैं newcomers को ट्रेल्स साथ पर्याप्त संख्या हो जो डिजाइन क्षेत्रहरु, मा सुत्न सल्लाह। साँच्चै, थकान र निद्रामा कमी दुर्घटनामा मा रही जोखिम वृद्धि हुनेछ जो चालक को स्वास्थ्य, मा नकारात्मक प्रभाव छ।
लेक Baikal प्राप्त गर्न सस्ता तरिका
निस्सन्देह, राजधानी थुप्रै बासिन्दा मास्को सस्तो देखि लेक Baikal प्राप्त गर्न कसरी सोच हो। दुर्भाग्यवश, हामी बजेट एक धेरै दूरी हटाउन छ बाटो को गोप्य तपाईं प्रकट छैन। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो किराना dearness र cheapness छ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि, बाटोमा केही दिन गुमाउन भन्दा केही मानिसहरू प्रति उडान पन्ध्र हजार rubles खर्च गर्न सजिलो। समय बर्बाद को यस श्रेणी लागि - यो कुनै किसिमको बहाना छैन लक्जरी छ। तर अरूलाई कार को सप्ताह को एक जोडी को लागि सडक मा खर्च गर्न, तर बचत गर्न इच्छुक छन्।
त्यसैले हरेक सम्भावित पर्यटक आफूलाई लागि ताल सस्ता र सबै भन्दा सहज छ पुग्न मास्को देखि आफूलाई निर्णय छ। र हामी, बारी मा, सबै सुविधा र जब तपाईं एउटा यात्रा मा जा विचार गर्न आवश्यक छ भनेर nuances भेला भए।
यात्रा को विशेषताहरु: सामान्य निर्देशन
हरेक यात्रा ध्यान योजना हुनुपर्छ, र यो अनुभव यात्री को सिफारिसहरू आधारित हाम्रो वर्तमान जानकारी, मा मदत गर्न सक्छ:
सबै भन्दा राम्रो समय ताल भ्रमण गर्न - यो जुलाई र अगस्ट छ;
ताल पानी द्वारा पुग्न सकिन्छ इर्कुत्स्क देखि गर्मी को दोस्रो आधा - जहाज मा;
सडक मार्ग निर्माण खातामा संघीय राजमार्ग को workload लिनुपर्छ;
लेक Baikal पठाइएको नयाँ सेना संग पर्यटन मा खर्च र त्यसपछि एक दिन इर्कुत्स्क राम्रो आइपुगेपछि;
पैसा को सबै भन्दा यात्रा नगद, टी मा राखिएको गर्दा हुनुपर्छ। सबै साना सहर गर्न।, तपाईं चाँडै एक एटीएम पाउन सक्नुहुन्छ।
हामी यी सुझावहरू लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने आशा। पवित्र पोखरी Baikal आफ्नो यात्रा आनन्द लिनुहोस्!
सपना को व्याख्या: के चींटियहरुलाई को सपना?
"Belosalik": सस्तो अनुरूप, दबाइ को विवरण, प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
मोटरबाटो - यो छ ... राजमार्ग ट्राफिक